SRK Oo Gabadha Reer Pakistan Mahira Khan Ka Saari Doono Filimkiisa Raees - Hablaha Media Network
SRK Oo Gabadha Reer Pakistan Mahira Khan Ka Saari Doono Filimkiisa Raees
HMN:- Atirishada reer Pakistan Mahira Khan ayaa la sheegay in gabi ahaanba laga saari doono filimka Raees si dhibaatada filimkaan soo gaari karto meesha looga saaro.
Shah Rukh Khan iyo Reteish Sidhwani oo ah soo saarayaasha filimka Raees ayaa isla garteen in Mahira Khan filimkaan laga saaro inkastoo go’aankan uu ahaa midn xanuun badan qaashadiisa.
Waxaa la sheegay muuqaalo muhiim ah SRK iyo Mahira Khan oo xaaskiia ku jileyso filimka Raees dhiman yihiin la duubo, sidaa darteed suurta gal ma ahan in gudaha Hindiya xiligaan Mahira Khan si xuriyad ku dheehan ay duubista filimka Raees u amba qaado.
Qorshaha wuxuu yahay in SRK uu duubo bisha November ee nagu soo fool leh qaybaha ka harsan filimka Raees haatan waxaa la raadinayaa atirishadii Mahira Khan lagu badali lahaa.
Sidoo kalena muuqaladii ay horey u duubtay Mahira Khan filimka Raees gabi ahaanba meesha ayaa laga saari doonaa.
Filimka Raees waxaa la qorsheenayaa in daafaha caalamka laga daawado 26-ka Janaayo 2017 sidaa darteed Mahira Khan hadii laga saaro wax xanibaad iyo rabshad ma laga hor imaan doono filimkan madaama jilaayaasha reer Pakistan oo kaliya lagu kacsan yahay.